Izay Aterineto Shinoa Toerana Fiarahana Miasa Tsara indrindra ho an'ny mpiasa vahiny
Izay Aterineto Shinoa Toerana Fiarahana Miasa Tsara indrindra ho an’ny mpiasa vahiny
Izay an-tserasera Shinoa toerana fiarahana miasa tsara indrindra ho an’ny fivoriana sy ny fiarahana amin’ny Tanibe ny vehivavy. Rehefa miaina any Atsinanana nandritra ny taona maro sy miresaka ny mpila ravinahitra ny namana ao Shina — izao no efa hita. Hamonjy ny fotoana sy ny vola amin’ny alalan’ny sonia miaraka ilaina indrindra ny fiarahana amin’ny aterineto ny vohikala. Nanome hisy ny kolontsaina dona anjara. Koa, ho mora ny zavatra rehetra raha tsy miteny Mandarin. Shina Lahatsary Mampiaraka — taona maro taorian’ny fanampiana ireo mpiasa vahiny sy ny vehivavy avy any amin’ny tanibe mahazo miara-ho an’ny olon-tiany sy ny fitiavana.
Jereo ny tafatafa miaraka amin’i Shina koa ny Lahatsary Mampiaraka mpitondra tenin’ny mba hahazo tsara kokoa ny hevitra ny fomba izany dia afaka manampy. Jajuan — Izany no ambony Shinoa matchmaking toerana. Na dia afaka mampiasa ‘ny Google Translate’ mba hahazo anao nanomboka. Shanghai stuff — ao Amin’ny toerana ity ianao dia afaka mahita ireo zava-nitranga ara-tsosialy ary koa ny an-tserasera ireo mpikambana izay misokatra ny volon-koditra mampiaraka. Na dia afaka hahita ny olona avy amin’ny faritra hafa ao amin’ny tanibe Shina — indrindra fa ilaina raha toa ianao ka ao Shanghai.
Inona raha toa ka tsy miteny Mandarin
Misy be dia be ny an-tserasera hafa ny mampiaraka toerana ho an’ny mpiasa vahiny izay tsy miteny Mandarin. Ny sasany ohatra dia: icq — Izany no Shina ny dikan MSN. Indrindra Tanibe vehivavy mihaona dia manana izany. Azonao atao ihany koa ny mahita ireo tovovavy sasany amin’ny alalan’ny izany. Fotsiny ny mandeha any amin’ny toerana sy ny misintona izany. Dia manana ny PC sy Mac dikan ka sisa mora amin’ny toe-javatra roa. Fanamarihana: Tokony hametraka ny mombamomba azy ao Mandarin na ny teny anglisy. Manoro hevitra aho ny fanaovana izany amin’ny teny anglisy. Indrindra ireo izay mampiasa azy io hiafara fivoriana kokoa ny vehivavy ao an-toerana amin’ny teny anglisy mombamomba azy. Raha manana finday avo lenta azonao atao ny manamarin avy WeChat — Izany dia tambajotra sosialy app fa ny ankamaroan’ny Tanibe ny vehivavy mampiasa. Rehefa alaina ianao io ary nanao ny mombamomba izany dia hampahafantatra anao ny daty mety ao Shina. Momo: Momo dia Shinoa iray fampiharana ny fivoriana Shinoa vehivavy. Ity iray ity dia mitarika tsikelikely kokoa ny mety ho fiarahana noho ny mifampiresaka amin’ny namana. Scout — Hafa ara-tsosialy ao amin’ny tambajotra fampiharana. Skoto mamela anao hanao bebe kokoa noho ny hifandray amin’ny Tanibe ny vehivavy teo akaiky teo. Ianao koa mahazo ny mahafantatra hoe hatraiza izy no avy aminao, ary izay olona efa ampy anareo avy. Izany no mahatonga an-tserasera Shinoa mampiaraka be mora kokoa. Mandehana any amin’ny ‘apps download’ ny fampiharana ny manan-tsaina an-tariby sy ny afaka mahazo roa ireo dia samy momba ahy (tsy vazivazy — dry zareo efa maimaim-poana.) -) Jereo ny zavatra mpila ravinahitra Mampiaraka Mpanazatra ‘Kane Midadasika’ dia hoe ary inona ny tranonkala nanoro hevitra izy. Kane manampy ireo mpiasa vahiny amin’ny Teny Latina sy ao an-toerana ry zalahy avy any Shina amin’ny Olona any Shina. Hahazo ny tena avy ny fihaonana Tanibe ny vehivavy an-tserasera. Ianao hanao bebe kokoa noho ny hihaona tsara tarehy Aziatika tompokolahy: Ianao no hahita ny vaovao kolontsaina sy hianatra ny sasany amin’ireo Shinoa loatra. Marina izany dia miankina amin’ny inona no karazana vehivavy ianao fivoriana. Mahazo an-tsaina ny samy hafa karazana tsara tarehy vehivavy Shinoa dia mety hiafara fivoriana ity. Izay iray(s) fa tianao ny daty sy ny mifamadika amin’izany.
Hahitana ny tenanao
-) ‘Dan fotoana Fivelaran’ny tena za-draharaha, ny tena manam-pahalalana, ary tsara ny mpampianatra. Izy no nahazo ny fahatakarana lalina ny rehetra mampiaraka dingana ao Firenena aziatika. ‘
← Izay Aterineto Shinoa Toerana Fiarahana Miasa Tsara indrindra ho an'ny mpiasa vahiny
Ny amin'ny Chat Roulette: Fiarahana amin'ny Chatroulette Ankizivavy →